नेपाली दर्शकश्रोताको माया पाएका छौं : राम कँडेल – Hamrai Sajha Patrika
By हेमन्त न्यौपाने	 Last updated Dec 14, 2019
नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा यतिखेर धुम मच्चाईरहेको लोकदोहोरी गीत “छोटो कपाल” अहिले नेपाली युट्युवमा ट्रेन्डिङ नम्बर १० मा आफ्नो स्थान बनाईरहेको छ । ईनाक्षी इन्टरटेन्मेन्टको युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक भएको गीतले अत्याधिक चर्चा कमाइरहदा हाल अष्ट्रेलियामा रहनुभएका हाम्रै साझा पत्रिका सम्पादक हेमन्त न्यौपानेले अष्ट्रेलियाको मेलवर्नबाट सञ्चालन भईरहेको युट्युव च्यानल ईनाक्षी इन्टरटेन्मेन्टका सञ्चालन राम कंडेलसंग गर्नुभएको एक अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
प्रश्न :- नमस्कार यहाँलाई ! तपाईं सञ्चालक रहेको ईनाक्षी इन्टरटेन्मेन्टले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको “छोटो कपाल” म्युजिक भिडियोले अहिले नेपाली युट्युवमा धुम मच्चाउन सफल भएको छ । दुईदिन अधि मात्र सार्वजनिक भएको गीत छोटो समयमै अत्याधिक चर्चा कमाउन सफल भयो । कस्तो महशुस भईरहेको छ, बताईदिनुस न ?
राम कँडेल :- नमस्कार ! पक्कै पनि हामीले बजारमा ल्याएका गीतहरुलाई दर्शक श्रोताहरुले अत्याधिक माया गरिरहनुभएको छ । यस पटक पनि दर्शकको माया पाउन सफल भएका छौं । हाम्रो सम्पुर्ण टिम यतिखेर उत्साहित छौं । हाम्रो टिमले राम्रोसँग काम गरेको थियो सोही अनुसारको परिणाम पाउँदा हामी खुशी छौं ।
प्रश्न :- पछिल्लो समय थुप्रै गीतहरु आईरहेका छन । तर “छोटो कपाल”नै हिट हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
राम कँडेल :- (उहाँले मुस्कुराउदै जवाफ दिएभयो) यसको छुट्टै फर्मुला छ । अहिले नभनौ होला ……
प्रश्न :- ईनाक्षी इन्टरटेन्मेन्टले यस अधि सार्वजनिक गरेको गीत “पिँडालु”ले पनि निकै नै ख्याती कमायो । अहिलेसम्म पनि गीत नेपाली लोकदोहोरी प्रेमीहरुको मुखमै झुण्डिरहेको छ । एकपछी अर्को सफल म्युजिक भिडियो ल्याईरहनुभएको छ नि । प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
राम कँडेल :- हामीले पहिले पनि मेहनतका साथ काम गरेका थियौं । म्युजिक भिडियो हिट भयो, निकै राम्रो प्रतिक्रियाहरु पायौं, यसैले नै छिट्टै “छोटो कपाल” ल्यायौं ।
प्रश्न :- “छोटो कपाल” म्युजिक भिडियोमा समेत सफल भैसक्नुभएको छ । निकट भविष्यमा के छ, योजना भन्न मिल्ने भए जानकारी गराउनुस् न ?
राम कँडेल :- हामी आन्तरिक छलफलमा छौं । राम्रो प्रोजेक्ट गर्छौ, दर्शकश्रोताहरुलाई फुल इन्टरटेनमेन्ट दिनु हाम्रो लक्ष्य हो । ईनाक्षी टिम यसमा प्रतिबन्ध छ । हाम्रो टिमका निर्देशक दिपक सापकोटा जि यसमा कटिबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँले अगामी योजना अझै उत्कृष्ट बनाउने भन्नुभएको छ । तर योजनाको टुंगो भने लागिसकेको छैन । हाम्रो टिम ठुलो छ, सबैसंग सल्लाह हुन्छ अनि हामी जानकारी दिने नै छौँ ।
प्रश्न :-एउटा गीत रेकर्ड गराएर म्युजिक भिडियो तयारी गर्दा सम्म निकै खर्च लाग्छ होला । युट्युवबाट सबै खर्च उठाउन सकिन्छ कि? कस्तो छ अवस्था जानकारी गराउनुस् न ?
राम कँडेल :- पक्कैपनि, महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । नेपाली चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोहरुको एउटा पिडादायी पक्ष यहीँ हो । सबैले भिडियो राम्रो बनाउछु भनेर लाग्नुभएको हुन्छ । तर सबै सफल हुन सक्दैनन् । सर्वविदितै छ, कतिले आफ्नो लगानीको सानो अंश समेत उठाउन सक्दैनन् । हाम्रो म्युजिक भिडियोहरुमा त्यो समस्या आएको छैन् । हामीले मेहनतका साथ काम गरेका छौं । हाम्रो कामको प्रतिफल मिठो नै हुन्छ ।
प्रश्न :- म्युजिक भिडियो निर्माण पक्षमा सबै अनुभवी र दक्षहरु पात्रहरु मात्र छन । त्यसमा मुख्य भुमिकाका देखिएका राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल अष्ट्रेलिया शाखाका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईलाई मौका दिनुभएको रहेछ । यसको पनि छुट्टै चर्चा छ । ईनाक्षी इन्टरटेन्मेन्टले नयाँ कलाकारलाई मौका दिएर रिक्स किन मोल्यो ?
राम कँडेल :- उहाँको लूक्स-हाइट राम्रो छ, एक कुशल मोडलमा हुनुपर्ने सबै उहाँमा देख्यौं । हामीले उहाँले यसलाई राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ठान्यौ । उहाँले यस अधि पनि म्युजिक भिडियो गर्दै आउनुभएको हो, उहाँ एकदमै नयाँ कलाकार भने होइन । लामो समय देखि मोडलिङ क्षेत्रमा नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँको लोकदोहोरी गीत संगीत प्रतिको माया र क्षमतालाई हामीले चिनेका थियौं । उहाँले आफुलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुभएको छ ।
प्रश्न :- धन्यवाद समयका लागि, ईनाक्षी इन्टरटेन्मेन्टको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना “छोटो कपाल” अझै हिट होस, हाम्रो पनि शुभकामना, अन्तमा हामीले सोध्न छुटेका तथा तपाईंले भन्न चाहेका केहि भन्न चाहानुहुन्छ?
राम कँडेल :- धन्यवाद, हाम्रै साझा पत्रिका अनि यहाँलाई हाम्रो यस प्रोजेक्ट प्रति चासो दिनुभयो । हाम्रो सफलतामा यस मिडियाको माया सहयोग प्राप्त भयो । हामी निकै खुशी छौं । मिडिया नै दर्शकश्रोताहरुकै माया र आशिर्वादले नै हामी अगाडी बड्ने हो ।ईनाक्षी टिमका साथीहरु डाईरेक्टर दिपक सापकोटासंगै शशिधर कँडेल अनि माधव न्यौपाने हुनुहुन्छ । उहाँहरुको धेरै मेहनत छ, यस अन्तर्वार्ता दिँईरहदा म उहाँहरुलाई समेत सम्झन चाहान्छु । हामीले अग्रज गायक गायिकाहरुसंग काम गरेका छौं । संगसंगै गायक तेजश रेग्मी, गायिका विष्णु माझी, मोडल दुर्गेश थापा लगायत सिगो टिमलाई म सम्झन चाहान्छु ।
हेर्नुस् म्युजिक भिडियो
मन्त्री बिना मगरद्वारा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको अनुगमन
बेलौरीको जबदिया कृषि बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड ११ औ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
सन्दर्भ पच्चीसौं जनयुद्ध दिवस: “अब जनयुद्ध दिवस हैन, सहिद स्मृति दिवस”…
लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, अष्ट्रेलिया शाखाको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न २०७६, २८ मंसिर शनिबार ०७:४०
समिक्षा अधिकारीको ‘केटो अलि कमाउने होस’, युट्युवमा सार्वजनिक ! २०७६, २८ मंसिर शनिबार ०७:४०
मिर्गौला पीडित श्याम रौनियारलाई सुदुरपश्चिमेली नेपाली समाजद्वारा आर्थिक सहयोग २०७६, २८ मंसिर शनिबार ०७:४०
आजको राशिफल/आज मिति २०७७ मङ्सिर ८ गते सोमबार २०७६, २८ मंसिर शनिबार ०७:४०
शिरीष गौतमद्वारा अभिनित मनै छुने शब्दसंगीत भएको म्युजिकभिडियो “मेशिन बन्नुपर्छ” युट्युवमा सार्वजनिक २०७६, २८ मंसिर शनिबार ०७:४०
सन्दर्भ पच्चीसौं जनयुद्ध दिवस: “अब जनयुद्ध दिवस हैन,…
२०७६, १ फाल्गुन बिहीबार २३:१२